Gen. Saacid oo xilkiisa si rasmi ah ula wareegay | KEYDMEDIA ONLINE
Gen. Saacid oo xilkiisa si rasmi ah ula wareegay
Muqdisho (KON) Taliyaha cusub ee ciidamada Booliska Soomaaliyeed Gen. Saacid ayaa la wareegay xilkiisa ka dib munaasabad maanta lagu qabtay xarunta General kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Taliyaha cusub ee ciidanka Booliiska Soomaaliyeed General C/xakiim Daahir Saciid oo loo yaqaan Saacid ayaa halkaasi ka sheegay in ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ay heli doonaan daryeel wanaagsan oo ku aadan dhanka dhaqaalaha iyo cadaalada intaba.
Wuxuu sheegay inay ku dadaali doonaan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho iyo gobalada dalka inta ay ka joogaan ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Taliyihii hore ee ciidamada Booliska Soomaaliyeed Shariif Sheekhunaa oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay inuu maanta si rasmi ah u wareejiyo xilkaan oo uu in mudo ah soo haayay.
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo madasha xilwareejinta ay ka dhaceysay ku sugnaa ayaa hadal uu dhankiisa jeediyay wuxuu ku sheegay in ammaanka Muqdisho looga fadhiyo inay sugaan ciidanka Booliiska Soomaaliyeed.
Saacid ayaa ku nuux-nuuxsaday in taliska cusub ee ciidanka Booliiska looga baahan yahay inay la yimaadeen qorshe ammaan oo Muqdisho wax looga qabanayo.
General Saacid oo maanta si rasmi ah xilka taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed loogu wareejiyay ayaa horay u ahaan jiray taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed,isaga oo in muddo ah lasoo shaqeeyay Booliiska Soomaaliyeed.